၀င်ငွေခွန် ၃ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ကားလောကအတွက် ဘာတွေထူးခြားလာမလဲ…? - Myanmar Automobile and Equipment Directory
၀င်ငွေခွန် ၃ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ကားလောကအတွက် ဘာတွေထူးခြားလာမလဲ…?
ယနေ့ ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက် နေ့ခင်း ၁နာရီခွဲကနေ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ အစည်းဝေးမှာတော့ ၁ ကျပ်ကနေ သိန်း ၁,၀၀၀ အထိအတွက် ၀င်ငွေခွန်ကောက်ခံမှုကို ၃ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် အဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့ရာမှာ ထောက်ခံမဲ ၅၀၃မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၁၂ မဲနဲ့ ကြားနေ ၂မဲတို့နဲ့ အဆိုပြုအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ အထူးကုန်စည်ခွန်ကတော့ ယမန်နှစ်ကအတိုင်း ဆက်လက်ကောက်ခံဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ယခုအဆိုပြုအောင်မြင်ခဲ့သော ၀င်ငွေခွန် -
၁ ကျပ် မှ ၁ဝဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ အထိ ဝင်ငွေခွန် ၃ %
၁ဝဝ,ဝဝဝ,ဝဝ၁ မှ ၃ဝဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ အထိ ဝင်ငွေခွန် ၅%
၃ဝဝ,ဝဝဝ,ဝဝ၁ မှ ၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ အထိ ဝင်ငွေခွန် ၁ဝ%
၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ,ဝဝ၁ မှ ၃,ဝဝဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ အထိ ဝင်ငွေခွန် ၁၅%
၃,ဝဝဝ,ဝဝဝ,ဝဝ၁ နှင့် အထက် ဝင်ငွေခွန် ၃၀%
ဒါကြောင့် ကားလောကအတွက် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ
ကားလောကအတွက် လက်ရှိမှာကောက်ခံနေတာက ၁၅ရာခိုင်နှုန်းပါ။ ၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားလို့ အသစ်ဘယ်မောင်း (brand new) တွေဈေးကျသွားမယ်။ ဒီတော့ brand new ၀ယ်လိုအားတက်လာနိုင် ပါတယ်။ ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ တစ်ပတ်ရစ်ညာမောင်း (used) တွေ ၀ယ်လိုအားမကျရင်တောင်မှ ဈေးအတော်အသင့်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၀င်ငွေခွန်လျှော့ချသတ်မှတ်မှုက တစ်ပတ်ရစ်ကားဈေး ကွက်အတွက် ရိုက်ခေတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုပြီး ကားလောကမှာသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြတာတွေရှိပါတယ်။